बीमा समितिको ५१औं वार्षिकोत्सव : ‘वित्तीय बजारमा गुणात्मक वृद्धि आवश्यक’ | गृहपृष्ठ
Home समाचार बीमा समितिको ५१औं वार्षिकोत्सव : ‘वित्तीय बजारमा गुणात्मक वृद्धि आवश्यक’
on: २ जेष्ठ २०७६, बिहीबार ०६:०५ समाचार
काठमाडौं । संघीय अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले वित्तीय बजारमा संख्यात्मक वृद्धि नभएर गुणात्मक वृद्धि हुनुपर्ने बताएका छन् । काठमाडौंमा बुधवार बीमा समितिको ५१औं वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले बीमाक्षेत्रको गुणात्मक विकासमा जोड दिएका हुन् ।
‘बैंकहरू मर्जरमा गएपछि बैंकिङ क्षेत्रमा गुणात्मक विकास भएको छ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘यो बीमामा पनि लागू हुन्छ । त्यसैले बीमा क्षेत्रमा संख्यात्मक भन्दा पनि क्षमता, दायरा र सेवा विस्तार गर्न आवश्यक छ ।’ समितिले ढिलै भए पनि मर्जरसम्बन्धी निर्देशिका ल्याउनु उदाहरणीय काम भएको उनको भनाइ छ ।
उत्पादन क्षेत्र र आर्थिक गतिविधि विस्तार भएपछि मात्र वित्तीय क्षेत्रको विस्तार हुने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । ‘वित्तीय क्षेत्रको एकोहोरो विस्तार भएर केसैलाई फाइदा छैन,’ उनले भने, ‘अन्य क्षेत्रलाई पनि विस्तार गर्न बैंक तथा बीमा कम्पनीहरूमा भएको पूँजी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउनुपर्छ ।’ यस्तै अरूको जोखिमको सुरक्षण गर्ने बीमा कम्पनीहरूले आफ्नै जोखिममा पनि ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले भने, ‘धेरै बीमा कम्पनीमा बैंकरहरूको लगानी छ । उनीहरूले उद्योग लगायत अन्य क्षेत्रमा पनि लगानी गरेका छन् । यसले निकट भविष्यमा ‘सिस्टेमिक रिस्क’ सृजना गर्न सक्छ ।’ त्यसैले बीमा समितिले संस्थागत मात्र नभएर सिस्टमको आधारमा पनि कम्पनीको नियमन गर्नुपर्ने उनले औंल्याए ।
लघुबीमा मार्फत साना जोखिमलाई पनि बीमाको दायरामा ल्याउनुपर्ने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । उनले भने, ‘साना किसान छन्, सानो व्यवसाय छ, जसअनुसार जोखिम पनि सानै छ । तर, कम्पनीहरू ठूलो ठूलो बीमा खोज्दै हिँडेका छन् ।’ यस्तो विषयलाई ध्यानमा राख्दै कम्पनीहरूले लघुबीमाको दायरा बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले १ वर्षको अवधिमा बीमा व्यवसायसँगै पहुँच र विस्तार पनि उच्च रूपमा विस्तार भएको बताए । उनले भने, ‘विसं. २०७४ को अन्त्यमा बीमाको पहुँच १० प्रतिशत नेपालीमा पुगेको थियो । तर, गत फागुनसम्म यस्तो पहुँच १८ प्रतिशत नेपालीमा पुगेको छ ।’ साथै व्यावसायिक रूपमा बीमा कम्पनीहरूले उल्लेख्य बीमाशुल्क आर्जन गरेको उनको भनाइ छ ।
आगामी असारभित्र बीमाको पहुँच २० प्रतिशतसम्म पुग्ने अध्यक्ष चापागाईंले बताए । यस्तै चालू आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा बीमाक्षेत्रको योगदान ३ प्रतिशत हुने उनको दाबी छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीले बीमाक्षेत्रले गुणस्तरीय सेवा दिनुपर्ने बताए । स्थापना कालदेखि नै समितिले बीमाक्षेत्रको नियमनसँगै आवश्यक पूर्वाधार उपलब्ध गराउने काम गर्दै आएको छ ।
१ जेष्ठ २०७६, बुधबार ०७:५१